DHEGEYSO-Gudoomiyaha gobolka Nugaal oo ka warbixiyey ciidankii xarunta barlamaanka qabsaday una jawaabey Faarax C Shire. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Gudoomiyaha gobolka Nugaal oo ka warbixiyey ciidankii xarunta barlamaanka qabsaday una jawaabey Faarax C Shire.
Febraayo 26, 2017 5:14 b 0
Garoowe, Feb 26 2017-Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo waraysi siinayey Idaacadda Daljir ayaa ka hadlay ciidamo maanta gelinkii hore isku wareejiyey xarunta barlamaanka Puntland.
Cumar Faraweyne ayaa ugu horayn sheegay in ammaanka guud ee magaalada uu degan yahay islamarkaana ciidanku aysan xarunta lawareegin haseyeeshee ay korka ka qabsadeen maamulkeeda.
Gudoomiyuhu wuxuu xusay inay ku guulaysteen in ciidanka lagu celiyo fariisimo kuyaala dhanka Laac-dheere, maalinimada berri ahna ay kala hadli doonaan xuquuqdooda.
Dhanka kalena gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dad ka shaqaynaya xumaha Puntland ay warka si kale u dhigeen loona baahan yahay in shacabka iyo qof walba uu nabadda ka shaqeeyo.
Ugu dambayntiina gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa waxa uu si kulul uga jawaabey hadal ka soo yeeray wasiirkii hore ee Maaliyadda Faarax Cali Shire, isagoona sheegay in xilligii u wasiirka ahaa ay dheceen falal dhaqaale xumo oo kuwaan kadaran.
http://daljir.com/DHEGEYSO-Gudoomiyaha gobolka Nugaal oo ka warbixiyey ciidankii xarunta barlamaanka qabsaday una jawaabey Faarax C Shire.
DHEGEYSO-Wajiga 2aad ee tirakoobka shaqaalaha Puntland oo la daahfuray